Masar oo maxkamadayneysa shaqaale ka tirsan ururo aan dowli ahayn oo shisheeye – Radio Daljir
Masar oo maxkamadayneysa shaqaale ka tirsan ururo aan dowli ahayn oo shisheeye
Qahira,Feb 6 -Dowladda dalka Masar ayaa sheegtay in ay maxkamadayneyso 43 qof oo ay ku jiraan 19 muwaadiniin maraykan ah oo ku eedaysan in ay maalgelinayeen dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah deganaanshaha dalkaasi masar.
Golaha militeriga ee dalka Masar oo haya talada dalkaasi ayaa ku eedeeyey ajaanibta la maxkamadaynayo in ay lacag ku bixinayeen banaanbaxyada ay dhigayeen dadka dowladda ka horjeeda ee mudaharaadayaasha ah.
Police-ka dalka masar ayaa galay xafiisyada ururada NGO-yada ah ,waxana xayiraado lagu soo rogay shaqaale ajaanib oo loo sheegay in aanay dalka ka dhoofikari sababo baadhitaan lagu hayo awgeed.
Dowladda dalka maraykanka ayaa ku hanjabtay in ay dib u eegis ku samayndoonto gargaarka ay siiso Masar ,haddii maamulayaasha dalka masar ay sii wadaan hawlaha ka dhanka ah NGO-yada .
Afhayeen u hadashay wasaarada arimaha dibadda ee dalka maraykanka oo lagu magcaabo Victoria Nuland ayaa shegtay in ay si weyn uga werwersanyihiin warbixinada ay ka helayaan dalka masar,waxana ay intaa ku dartay in ay sharaxaad ka dalbanayaan xukuumadda dalka Masar.
Kooxda Human Rights Watch ayaa ugu baaqday maamulayaasha Masaaridda in ay tuuraan dhamaan eedaymaha loo jeediyey shaqaalaha NGO-yada.
?maalgelinta dibaddu waa qayb nolosha ka mid ah, xukuumadda Masar waxa ay imika isticmaalaysaa xeeladihii Zimbabwe iyo Ethiopia ee lagu aamusinayey codka xorta ah ? sidaas ayaa lagu sheegay baaq uu soo saaray ururka Human Rights Watch.
Ururada NGO-yada ah ee ay eedayntu kaga socoto dalka Masar ayaa waxaa ka mid ah International Republican Institute (IRI) iyo National Democratic Institute (NDI), oo laga leeyahay dalka maraykanka , islamarkaana dhiirigelinayey hawlaha dimuquraadiyadda ee dalka Masar.